မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ မဖြစ်စေလို
တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် နှင့် အင်္ဂါဂြိုဟ် သို့မဟုတ် … တစ်ဦးပိုင် နှင့် အများဆိုင်
ဒီဆောင်းပါးရဲ့ ကနဦးအစမှာ ..စာဖတ်သူတွေ အားလုံးကို ..ကျွန်တော် ဂြိုဟ်ပရိယာယ်သဘာဝနှစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
ဒီဂြိုဟ်ပရိယာယ် သဘာဝ နှစ်ခု ကို သိထားတော့ ဘာအကျိုးရှိမှာလည်း မေးစရာတော့ရှိပါတယ်။ အနဲငယ် ဥာဏ်ကိုလွှာ သုံးတတ်ပြီး ၊ ဗေဒင်ပညာကို အပေါ်ယံမျှ တီးမိခေါက်မိရင်တောင် …အကျိုးဖြစ်စေ ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော် တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ …ဗေဒင်ဆရာဆီ သွားမေးကြတဲ့အခါ …တစ်ခါတစ်လေ မှာ စပ်တူလုပ်ငန်း အကျိုးပေးမပေး ဆိုတာမျိုးကို မေးမြန်းလေ့ရှိကြပါတယ်။ အများစုသော ဗေဒင်ဆရာတွေကလည်း …စပ်တူ ဆိုသည့် ကဏ္ဍကို ဘယ်ဂြိုဟ်ရဲ့ သဘာဝ အခြေအနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ရမယ် ဆိုတာ မသိပေမယ့်….ခပ်တည်တည်နဲ့ ..ဖြေပေးတတ်ကြပြန်ပါတယ်။
အချို့သော ဗေဒင်ဆရာတွေက စ၊ဆ၊ဇ၊ဈ၊ည ..အင်္ဂါနံ အသံထွက်တာကြောင့် ..စပ်တူ ဟေ့ ဆိုတာနဲ့ အင်္ဂါနံပဲ ဆိုပဲ ကောက်ယူလိုက်ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါဆို ရှယ်ယာ လုပ်သင့်/ မလုပ်သင့် လို့ မေးလိုက်တော့ …ရာဟု လို့ပဲ ကောက်ရမလိုလို ၊ ဟိုလိုလို သည်လိုလို ဖြစ်ကြပြန်ပါရော…။
တစ်ကယ်တော့ စပ်တူလို့ပဲ ခေါ်ခေါ် ၊ ရှယ်ယာလို့ပဲ ပြောပြော ၊ အကျိုးတူ ပေါင်းစည်းမှု ၊ အတူတစ်ကွ ညီတူညီညာ ပေါင်းစည်း ဆောင်ရွက်မှု မှန်သမျှကို … အင်္ဂါဂြိုဟ် က ဖော်ပြပါတယ်။ (စ၊ဆ၊ဇ၊ဈ၊ည) နဲ့ အစပြုလို့ …..စပ်တူ = အင်္ဂါနံ ဆိုတာမျိုး ……….လုံးဝ ..မဟုတ်ပါ။ ပင်ကိုယ်သဘာဝ အရ သာလျှင် အင်္ဂါဂြိုဟ်ဟာ စပ်တူနဲ့ စိတ်ဝမ်းတူညီ ပေါင်းစည်း ဆောင်ရွက်မှု တွေကို ဖော်ညွှန်းနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် …..အင်္ဂါဂြိုဟ် အားကောင်းရင် …စပ်တူကဏ္ဍ မှန်သမျှ ၊ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မှန်သမျှ နဲ့ ကောင်းကျိုး ရရှိစေမှာဖြစ်ပြီး၊ အပြန်အလှန်အားဖြင့် အင်္ဂါဂြိုဟ် အားနဲ ခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့……အဆိုပါ ကဏ္ဍများမှာ ဆိုးကျိုး ဖြစ်တည်လာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ့ထက် ပိုမိုပြီး အသေးစိတ် သိရှိလိုတယ် ဆိုရင်တော့ အင်္ဂါဂြိုဟ်ရဲ့ သဘာဝအချို့ကို အောက်မှာ ဖတ်ရှုပါ။
အင်္ဂါဂြိုဟ်၏ လောကသဘာဝ အချို့အကြောင်း …
စပ်တူ (၀ါ) အစုရှယ်ယာ ကဏ္ဍများ လုပ်ဆောင်ခြင်း (၀ါ) အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
အချိန်အတိအကျ ၊ တွက်ကိန်းချ လုပ်ဆောင်ခြင်း …..
ရည်မှန်းချက် အတိုင်း တိကျစွာ လျှောက်လှမ်းခြင်း……
လှုံ့ဆော်ပေးခြင်း ၊ နိုးကြားစေခြင်း ၊ တပ်လှန့်ပေးခြင်း ……
စမ်းသပ်ကြည့်ခြင်း……၊ စူးစမ်းရှာဖွေခြင်း ………၊ သုတေသနပြုခြင်း ….
စစ်တပ် (၀ါ) လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ …
အမြန်အလျင် ..ရှောင်တစ်ခင် ဆောင်ရွက်မှု များ ….. နှင့် ရှေ့တိုးလုပ်ဆောင်မှုများ ..
ကောင်းပြီ ……. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံ့ရတနာတစ်ပါးလို့ သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ ….အမေစု (၀ါ) ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ရဲ့ မူလမဟာဘုတ်ဇာတာ မှာ ကော ……. အဆိုပါအင်္ဂါဂြိုဟ်ဟာ ဘယ်လို အနေအထား ရှိမလဲ….။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (၀ါ) အမေစု ၏ မူလ မဟာဘုတ်ဇာတာ
အင်္ဂါဂြိုဟ်ဟာ …. ရာဇ ဌာနမှာ ရပ်တည်ပြီး …၊ အင်အား အပြည့်အ၀ ရရှိထားပါတယ်။ အဆိုပါ အင်္ဂါဂြိုဟ်သည်ပင်လျှင် အမေစု ရဲ့ မူလ မွေးနံလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအင်္ဂါဂြိုဟ်ရဲ့ ရပ်တည်မှု အနေအထား အရ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးဟာ … အမေစုရဲ့ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးမှာ …အမြဲတစ်စေ ရရှိနေနိုင်မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဆိုင်ရာ အသက်အပိုင်းအခြား ၊ ကာလများ အလျောက် အင်အား အနဲအများ ကွာခြားမှု ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ ကောင်းပြီ။ ……….. ဘယ်အချိန်တွေမှာ ဘယ်လိုအင်အား အနဲအများ အတက်အကျ ဖြစ်မလဲ..။ အောက်ပါ အင်အားစစ် ဇယားကို ဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
ကောင်း အား သုံးမှတ် ၊ ဆိုးအား သုံးမှတ် ..ဟူပြီး အမြင့်ဆုံး နှင့် အနိမ့်ဆုံး ခွဲခြား နိုင်၏။ အမေစု၏ ဘ၀ဖြတ်သန်းရာ အချိန်ကာလများတွင် အဆိုပါ ကောင်းအားဆိုးအား တို့ ဖြစ်တည်လာပုံကို အောက်တွင် ဇယားဖြင့် ဖော်ပြပေးထားအပ်ပါသည်။
အင်္ဂါဂြိုဟ် အင်အား အနိမ့်အမြင့် ပြ စစ်ဆေးမှု ဇယား
မွေးစ …. မှ ….
၉နှစ် …. မှ ….
၂၆နှစ် … မှ ….
၃၆နှစ် … မှ ….
၅၅နှစ် … မှ …..
၆၇နှစ်… မှ …..
၈၈နှစ် …မှ ….
၉၄နှစ် …မှ ….
အနီရောင်ဖြင့် ဖော်ပြထားသော ကာလများမှာ လက်ရှိရောက်ဆဲ ဖြတ်သန်းနေချိန်ကာလ များ ကို ရည်ညွှန်းအပ်ပါသည်။ ဇာတာရှင်အမေစုသည်…၆၆နှစ် တင်းတင်းပြည့်ပြီးချိန် …၆၇နှစ်သို့ စတင် ၀င်ရောက်သည့် ကာလမှ အစပြုပြီး …. ၈၇နှစ် ထိတိုင်အောင် အင်္ဂါဂြိုဟ်…အထူးအားကောင်း စွာ တောက်ပ အသက်ဝင်လာသည့် ကာလ ကြုံကြိုက်လာသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်၏။ ယင်းမတိုင်မီ ….. ၅၅နှစ် မှ..၆၆ နှစ် အတွင်းတွင် မူ အင်္ဂါဂြိုဟ်မှာ …ကောင်းအား မရရှိသည့် အပြင် ဆိုးအား ၂မှတ်ပင် …ရရှိ ထားကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပေသည်။
ဟုတ်ပြီ ထားတော့…။ ဇယားကွက်တွေ ရှုပ်ပြနေတာထက် ….အကျိုးအပြစ် ကို ပိုမို ဖော်ပြရေးသား ရပါလျှင် …………..အင်္ဂါဂြိုဟ် အားနဲသော အချိန်များတွင် …၊ အင်္ဂါဂြိုဟ်မှ ဖော်ပြသော ဆိုင်ရာ သဘာဝ များသည် …အပြစ်သဘော သာ အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည် ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် အင်္ဂါဂြိုဟ် အားသာချက် ရရှိသောအချိန်များတွင်မူ ….ဆိုင်ရာဂြိုဟ်သဘာဝ တို့သည် အပြုသဘော ကောင်းသော သက်ရောက်မှု များအဖြစ် ပေါ်ပေါက်လာမည် ဖြစ်လေသည်။
ကောင်းပြီ…။ ဒါဆိုလျှင် ..ယခုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သော …(၆၇နှစ်မှ..၈၇နှစ်အတွင်း ) အချိန်ကာလ သည် အင်္ဂါဂြိုဟ်မှ ကောင်းကျိုးများ ရရှိနေနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ တွေ့မြင်ရပြီ ဖြစ်သည့် အတိုင်းပင်လျှင်…ယနေ့ စစ်တပ် (လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း) များ နှင့် အမေစု (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်) တို့ ၏ အတူတစ်ကွ လက်တွဲမှု ဖြစ်တည်လာခြင်းကို ပြည်သူ အားလုံး မြင်သာထင်ရှား ရှိခဲ့ပြီလည်း ဖြစ်ပေသည်။
ဤအချက်ကို ကျွန်တော်အနေ့ဖြင့် ပေါက်ဖော်လုပ် ရေးသားခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။ လွန်ခဲ့သော ဦးသိန်းစိန် မတိုင်မီ စစ်အစိုးရလက်ထက် ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မလွတ်မြောက်မီ ကတည်းကပင်လျှင် ….စစ်တပ်နှင့် အမေစု တို့ လက်တွဲလာနိုင်မည့် အနေအထားတို့ကို တင်ကြို အကဲဖြတ် ရေးသားတင်ပြခဲ့ဖူးပါသည်။ အသေးစိတ်ကို ( သည်အဖေ..သည်သမီး..သည်ခရီး နီးသလား) ဆောင်းပါးတွင် ပြန်လည် ဖတ်ရှုလေ့လာ နိုင်ပါသည်။ မြန်မာ့ရိုးရာ မဟာဘုတ် ဗေဒင်ပညာသည် …မထီမဲ့မြင် ပြုအပ်သော ပညာရပ်တစ်ခု မဟုတ်ပါ။ အလွန်မှန်ကန် တိကျသော ကိန်းစနစ်များ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
ဤပညာရပ် အရပင်လျှင် …အမေစု (၀ါ) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မူလဇာတာအရ လည်းကောင်း၊ မှည့်ခေါ်ထားသော အမည်အရလည်းကောင်း…တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် အားနဲရခြင်းကို ထင်ရှားစွာ ဖော်ပြနေပါသည်။
တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်သည် မူလမဟာဘုတ်ဇာတာတွင် မရဏဌာနတွင် ရပ်တည်ထားပြီး … အမည်အဖျားစာလုံးဖြင့် ပက္ခမိထားခြင်းကြောင့် ….အင်အား နှစ်ထပ်ကွမ်း ဆိုးအားပြုထားသည်။
တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်သည် အောက်ပါ သဘာဝများကို ဖော်ညွှန်းသည်။
တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်၏ လောကသဘာဝ အချို့အကြောင်း …
အောင်မြင်ခြင်း နှင့် ဆုလာဘ်
မင်းအစိုးရ နှင့် သြဇာအာဏာ
ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု နှင့် လူတစ်ယောက် ၏ ဘ၀ယုံကြည်ချက်များ
တစ်ဦးတည်း ရပ်တည်ခြင်း နှင့် မူလ ပထမ ဖြစ်ရခြင်းများ ..
စသည်ဖြင့် သော ….သဘာဝ တို့ကို ဖော်ညွှန်း၏။
အမေစု (၀ါ) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် … မူလဇာတာ နှင့် နာမည်အရ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် အားနဲကြောင်း အထူး ထင်ရှား၏။ ယင်းအချက်ကြောင့်ပင်လျှင် ….သူမ ၏ ဘ၀ခရီးအစ ငယ်နုစဉ်မှာပင် ဖခင် ကို စွန့်လွှတ် ဆုံးရှုံးရမှု စိတ်အနာတရ ဖြစ်စေ၏။ ယင်းအချက်ကြောင့်ပင်လျှင် … ကာလရှည်ကြာစွာ မင်းအစိုးရများနှင့် ….အတိုက်အခံသဖွယ် ရပ်တည်ရခြင်း၊ မင်းပြစ်မင်းဒဏ်သင့်ခြင်း ကို ခံစားခဲ့ရ၏။ ယင်းအချက်ကြောင့်ပင်လျှင် …တိုင်းတစ်ပါးမှ ပေးအပ်သော ဆုများကို ရရှိထိုက်ပြန်၏။ (တနင်္ဂနွေ+မရဏ)
မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ… တနင်္ဂနွေ၏ အပြစ်မကင်းသော သဘာဝဖြင့် အကျိုးသက်ရောက်နေသည့် ဇာတာရှင် တစ်ဦး ဖြစ်ပေသည်။
မည်သည့် ဇာတာရှင်မျိုးတွင် မဆို…………………..တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် အင်အား နဲပါးပြီး ၊ အင်္ဂါဂြိုဟ် အင်အားကောင်းမွန်မှု ရှိပါက…..၊ ထိုဇာတာရှင်သည် …တစ်ဦးတည်း ရပ်တည်ခြင်း ထက် ..အများနှင့် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းရပ်တည်ခြင်းက သာလျှင် …မုချဧကန် အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်တည်စေ၏။
နိုင်ငံရေးအမြင် လုံးဝ မပါဝင်ဘဲ …၊ မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်ပညာ အမြင်ဖြင့် ခိုင်မာစွာ ဟောဆိုရပါမူ … အမေစု (၀ါ) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေဖြင့် …သမ္မတ အရိုက်အရာ (၀ါ) ထိပ်ဆုံးအဆင့် ခေါင်းဆောင်နေရာ (၀ါ) အာဏာလက်ဝယ် အပိုင်ဆိုင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ် အဖြစ်… ၊ နိုင်ငံ့အကျိုးစီးပွားကို ထမ်းရွက်ရန် မသင့်သော ဇာတာရှင်မျိုး ဖြစ်၏။
စစ်တပ် (၀ါ) လက်နိုင်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် အတူတစ်ကွ …လက်တွဲပြီး ၊ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အနေအထား ဖြင့်သာလျှင် ၊ နိုင်ငံ့ကောင်းကျိုးကို ပြုထိုက်သော ဇာတာရှင် ဖြစ်သည် ဟု ကျွန်တော် ကိုစိုးမိုးထွန်း(ဗေဒင်ပညာသုတေသီ) အနေဖြင့် အတိအကျ ဟောဆိုအပ်ပေသည်။
အထက်ပါအချက်များအားလုံးသည် ..အမေစုအား .. နိုင်ငံတော်သမ္မတ မဖြစ်နိုင်ဟု ဟောဆိုခြင်း လုံးဝ မဟုတ်ပေ။ သို့သော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ အဖြစ် ..သို့တည်းမဟုတ် ..ထိပ်ဆုံးအဆင့် အာဏာရ ပုဂ္ဂိုလ် အဖြစ် ..နိုင်ငံ့အကျိုးသည်ပိုးမည် ဖြစ်ပါမူ..၊ အမေစု ၏ မူလဇာတာအရ ..တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်၏ ဆိုးအား ရိုက်ခံမှုများ သည်လည်း …ဒွန်တွဲပါဝင်လာမည်သာ ဖြစ်ကြောင်း ဟောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို တနင်္ဂနွေ သည် ..အမေစုအား …သက်တမ်းတိုစေနိုင်၏။ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ပိုမို ရင်ဆိုင်ရစေနိုင်၏။ နှလုံး နှင့် ဦးခေါင်းပိုင်းကို ထိခိုက်စေနိုင်၏။ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မှ ဖော်ပြသော လောက သဘာဝအရ .. ဆိုးကျိုးတို့ကို ..ပိုမိုရင်ဆိုင်ရစေနိုင်၏ ဟု ဟောဆိုအပ်ပေသည်။
အမေရိကန် သမိုင်းကြောင်းတွင် အမေစုကဲ့သို့ …အင်္ဂါ ရာဇဖွား ဇာတာရှင် နိုင်ငံ့အကြီးအကဲ တစ်ဦး ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူး၏။ အမေစု ၏ ဇာတာကဲ့သို့ပင် .. တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် အထပ်ထပ် အားနဲချက် ရှိသော ဇာတာရှင်မျိုးလည်း ဖြစ်၏။ ၄င်းမှာ အမေရိကန် သမ္မတ တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ဖူးသော ဂျွန်အက်ဖ် ကနေဒီ ဖြစ်ပြီး…၊ နောက်ဆုံးတွင် ဦးခေါင်းကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခံရပြီး ..ကွယ်လွန်ခဲ့သူဖြစ်၏။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှာ မူ နာမည်အရ အင်္ဂါဂြိုဟ်ဖြင့် လည်း ပက္ခမိထားသဖြင့် …သူတစ်ပါးလုပ်ကြံခံရသည်အထိ ..ကံအင်အားကြီးမားခဲ့၏။
အမေစုမှာမူ….အင်္ဂါဂြိုဟ် အင်အားနဲပါးခြင်း မရှိပါ။ နာမည်အရလည်း ကင်းလွတ်မှုရှိ၏။ သို့သော် ..တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် အထူးအားနဲ၏။ ယင်းအချက်ကြောင့် အစ သည်ပင်လျှင် အဆုံး …ဖြစ်သွားနိုင်၏။
ထိပ်ဆုံးအဆင့် ခေါင်းဆောင်အရိုက်အရာ ရရှိခြင်းသည်ပင်လျှင် … …. … ဘ၀ ၏ နောက်ဆုံး အချိန် ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်သွားနိုင်၏။
ကျွန်တော်သည် ကျွန်တော် ရိုသေလေးစားသော နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးကို ….ဗေဒင်ပညာ ရှုထောင့်အမြင်ဖြင့် ..ထိုကဲ့သို့ ..ရိုးသားစွာ တွေးမြင်မိပါ၏။ ပြည်သူပြည်သားတစ်ဦး အနေနှင့်မူ …ပြည်သူကို အကျိုးပြုလိုသော အမေစုကဲ့သို့ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအား …မြင့်သည် ထက်မြင့်လျှက်…အစိုးရခြင်းတို့ကိုလည်း …ပိုမို ရရှိ ပိုင်ဆိုင်စေလို၏။ ရှေ့ဖြစ်ဟော ပညာ လိုက်စားသူ တစ်ဦးအနေနှင့်မူ……အားသာချက်ထက် အားနဲချက် ရှိမည့် အနေအထားကို …မဖြစ်စေလိုပါပေ။
ထိုအချက်ကြောင့်ပင်လျှင် …အမေစု (၀ါ) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သမ္မတ မဖြစ်စေလို ..သော တွေးမြင်ခံစားမှု တစ်ခု ဖြင့် ….ဤဆောင်းပါးကို ရေးသားအပ်ပေသည်။